Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) - Hello Sayarwon
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း)
Dr. May Myat Hnin Aung မှ ရေးသားသည်။ 04/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ကဘာလဲ။
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း ဆိုတာ
မွေးရာပါ အာရုံကြောချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြစ်လာသည့် အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်သန္ဓေသားတွင် အာရုံကြောပြွန်မှ ဦးနှောက်၊ အာရုံကြောမကြီးနှင့် ၎င်းတို.ကို ဖုံးအုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။
အာရုံကြောပြွန်သည် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သန္ဓေတည်ပြီး ၂၈ရက် အကြာတွင် လုံးဝ ပိတ်သွားလေ့ရှိသည်။ အာရုံကြောပြွန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဖြစ်လာသော သို့မဟုတ် ကောင်းစွာမပိတ်သော ကလေးများတွင် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှင့် ကျောရိုးများတွင် ချွတ်ယွင်းချက်များဖြစ်လာသည်ကို ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းဟုခေါ်သည်။
ရောဂါပြင်းထန်မှု အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ လိုအပ်လျှင်ခွဲစိတ်ကုသရမည် ဖြစ်သော်လည်း ခွဲစိတ်တိုင်းလည်း ရောဂါအရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှစ်စဉ် ကလေး၁၅၀ဝခန့် ထိုရောဂါနှင့် မွေးဖွားလာကြသည်။ လူဖြူများနှင့် ဟစ်စပန်းနစ်လူမျိုးများတွင် အခြားလူမျိုးများထက် ပိုအဖြစ်များသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားစေသော အကြောင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း သုံးမျိုးရှိပြီး ပြင်းထန်မှုအခြေအနေကွာဟနိုင်သည်။
အသက်သာဆုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကျောရိုး တစ်ခု သို့မဟုတ် အများတွင် အနည်းငယ်ကွာဟနေခြင်းဖြစ်သည်။ အပိတ်အမျိုးအစားဖြစ်နေသော ကလေးများတွင် ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ အာရုံကြောဆိုင်ရာ လက္ခဏာများလည်း တွေ့ရလေ့မရှိပါ။
ရှားပါးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အာရုံကြောကို ဖုံးအုပ်ထားသောအမြှေးသည် ကျောရိုး၏ကွဲနေသော နေရာမှကျွံထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံမှန်ဖြစ်သဖြင့် ထွက်နေသောအမြှေးကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှာရာတွင် အာရုံကြောများကို ထိခိုက်မှုနည်းသည်။
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း အပွင့်အမျိုးအစား ဟုလည်းခေါ်ပြီး အပြင်းထန်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အများစုက ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းဟုခေါ်ပါက ဤအမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အာရုံကြောထိခိုက်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည့်
တက်ခြင်း (ခွဲစိတ်၍ ပိုက်ထည့်ရန် လိုနိုင်သည်။)
ခြေဖဝါး ပုံမမှန်ခြင်း၊ တင်ပါးဆုံမညီခြင်း၊ ကျောရိုးစောင်းခြင်းတို့ကဲ့သို့အရိုးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သည်။
စောစီးစွာ သိရှိပြီးကုသနိုင်ခြင်းက ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာခြင်းနှင့် အခြားအရေးပေါ်အခြေအနေများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ စောစီးစွာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တိကျသော အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိသေးပါ။ မိသားစုထဲတွင် အလားတူရောဂါမျိုးရှိခြင်း၊ ဖောလစ်အက်စစ် ချို့ယွင်းခြင်း စသည့် မျိုးဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ ပေါင်းဆုံခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံရသည်။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အာရုံကြောပြွန်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ရောဂါပါလာသော ကလေးတစ်ဦးကို မွေးဖူးသော ဇနီးမောင်နှံများတွင် ထိုရောဂါရှိသည့် ကလေးမွေးရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။
ဖောလစ်အက်ဆစ်သည် ကလေး၏ကျန်းမာသော ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသည်။ ဖောလစ်အက်ဆစ်ချွတ်ယွင်းခြင်းသည် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းနှင့် အခြား အာရုံကြောပြွန်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတက်ရောဂါအတွက်ဆေးများသောက်သုံးလျှင် အာရုံကြောပြွန် ချွတ်ယွင်းမှုများဖြစ်စေသည်။ ထိုဆေးများသည် ခန္ဓါကိုယ်၏ ဖောလစ်အက်ဆစ်အသုံးပြုမှုကို နှောင့်ယှက်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါရှိပြီး သွေးတွင်သကြားဓါတ်ကို ကောင်းစွာမထိန်းနိုင်သည့် အမျိုးသမီးများသည် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲသည့် ကလေးများမွေးနိုင်ခြေပိုများသည်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် အဝလွန်ခြင်းသည် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးနှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း အပါအဝင် အခြားအာရုံကြောပြွန်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်နှုန်းပိုများသည်။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ကလေးတွင် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်ရောဂါရှိနိုင်ကြောင်း သံသယရှိလျှင် ထိုရောဂါနှင့်အခြားမွေးရာပါ ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက် မီးမဖွားမီ ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မိခင်၏သွေးတွင်း င်္ဗဏ စစ်ဆေးခြင်း
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းကို စစ်ဆေးရာအတွင် အသုံးများသည်။ ကလေးထံမှထွက်သော င်္ဗဏ ပရိုတင်းကို စစ်ဆေးရန် ဆရာဝန်က သွေးနမူနာယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့သည်။
မိခင်၏သွေးတွင်း င်္ဗဏ နှင့်အတူ အခြားဟော်မုန်းများဖြစ်သည့် ံဃွယ ငည့ငဘငည ဗ နှင့်ြစသည်တို့ကို သွေးထဲတွင် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်သည်။
အချို့သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်များသည် ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်ရောဂါကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အာထရာဆောင်းကို အားကိုးသည်။ သွေးအဖြေတွင် င်္ဗဏ မြင့်တက်နေပါက အာထရာဆောင်းဖြင့် အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
သွေးအဖြေတွင် င်္ဗဏ မြင့်တက်နေပြီး အာထရာဆောင်းတွင် ပုံမှန်သာဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်က ရေမွှာရေစစ်ဆေးကြည့်ရန် ကမ်းလှမ်းမည်။ ကလေးကို ဝိုင်းထားသောရေမွှာရေနမူနာကို အပ်ဖြင့်ယူ၍ စစ်ဆေးသည်။
Spina Bifida (ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အာရုံကြောအကာမြှေးကျွံခြင်းတွင် အမြှေးများကိုနေရာပြန်ချပြီး ကျောရိုးအကွဲကို ပိတ်ရန် ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်သည်။
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲရောဂါ အပွင့်အမျိုးအစားတွင်လည်း မွေးပြီး၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း ကုသရန်လိုသည်။
စောစီးစွာ ခွဲစိတ်မှု ခံယူခြင်းသည် ဟင်းလင်းပွင့်နေသော အာရုံကြောများသို့ ရောဂါပိုးဝင်နိုင်ခြေလျော့ကျစေပြီး ထပ်မံဒဏ်ရာ၇ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်သည်။
ထိုကုသမှုကို ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ် မတိုင်ခင်ပြုလုပ်သည်။ ဆရာဝန်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၏ သားအိမ်ကို ဖွင့်ပြီး သန္ဓေသား၏ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်သည်။
ကုသခြင်းသည် ကနဦးခွဲစိတ်မှုဖြင့် မပြီးပါ။ ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်ကလေးတွင် ပြုပြင်၍မရသည့် အာရုံကြောပျက်စီးမှုဖြစ်နေနိုင်ပြီး ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ သမားတော်နှင့် ကုထုံးဆရာတို့ပါဝင်သည့် နယ်ပယ်စုံအသင်း၏ စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သည်။ ထိုကလေးများတွင် ဖြစ်ပေးလာမည့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုများလည်း ထပ်မံလိုအပ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အစောပိုင်းတွင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း ဖောလစ်အက်ဆစ် အလုံအလောက်ရှိရန် အရေးကြီးသည်။
သန္ဓေတည်ရန် ကြိုးစားနေစဉ်တွင် တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ဖောလစ်အက်ဆစ်၄၀ဝ မိုက်ခရိုဂရမ် သောက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများကဆိုသည်။
သဘာဝအတိုင်း ဖောလစ်အက်ဆစ်ကြွယ်ဝသော အစာများဖြစ်သည့်
သံပုရာနွယ်ဝင် အသီးများနှင့် ဖျော်ရည်များ
ဟင်းနုနွယ် ၊ ဂေါ်ဖီပွင့်စိမ်းစသည့် အစိမ်းရင့်ရောင် အသီးအရွက်များ တို့ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသောစားသောက်မှု ပုံစံကိုရယူနိုင်သည်။
Spina bifida. http://www.healthlinedme.com/Resource-Center/Medical-Health-Issues.aspx?Issue=Spina%20Bifida . Accessed March 18, 2017.
Spina bifida. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/spina-bifida/basics/prevention/con-20035356 . Accessed March 18, 2017.
Spina bifida. https://www.cdc.gov/ncbddd/spinabifida/data.html . Accessed March 18, 2017.